Amazon waxay rabtaa inay la tartanto Apple Music iyo Spotify | Waxaan ka socdaa mac
Amazon waxay dooneysaa inay la tartanto Apple Music iyo Spotify
Amazon ayaa diyaarinaya soo bandhigida cusub adeegga rukunka muusikada, Reuters ayaa werisay. Shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda ayaa dhameystireysa rukhsadaha adeeggan oo kale, waxaana lagu xantaa inay billaabeyso. dabayaaqada xagaagan ama horraantii dayrta. Dabcan, Amazon horeyba waxay u siisay adeeg muusig bilaash ah macaamiisha Prime, laakiin adeegan cusub ayaa ku kici doona $ 9.99 bishii, oo waxay soo bandhigi doontaa a buugga ka tartan badan kan ay xafiiltamaan, iyadoo xadhkaha la saaray Apple Music iyo Spotify.
In kasta oo ay goor dambe soo gali doonto muusigga qulqulka, Amazon waxay aaminsan tahay in haysashada adeeg muusig oo dhammaystiran ay muhiim u tahay dalabkeeda inuu noqdo dukaan hal-joogsi ah oo loogu talagalay waxyaabaha ku jira, sida laga soo xigtay isla ilo-wareedyada. Bixinta muusigga cusub ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu kordhiyo rafcaanka Amazon Prime, iyo Amazon Echo.
Dhaqdhaqaaqa lagu bilaabayo adeegga xuquuq muusikada oo dhameystiran ayaa macno sameynaya, iyadoo la tixgelinayo habdhaqanka Amazon bilihii la soo dhaafay. Iyada oo lagu dadaalayo in la kala duwanaado waxa la bixinayo, jumladleyda ayaa bishii Abriil soo bandhigtay a adeegga fiidiyowga ee madaxa bannaan qiime ahaan $ 9 / bishii.
Apple Music waxaa la bilaabay bishii Juun ee sanadkii hore 2015 WWDC, waxaana la filayaa inuu cusboonaysiin weyn ku yeesho Maalmahan WWDC. Aniga shaqsiyan waan arkaa cilladaha badan ee Apple Music haddii aan isbarbardhigno Spotify, halkaasoo ay ku leeyihiin aqal adeegsade abysmal ah oo aan anigu ku daro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Amazon waxay dooneysaa inay la tartanto Apple Music iyo Spotify
Raac barnaamijka muhiimka ah ee WWDC 2016 tooska waxaan uga socdaa Mac
Tim Cook wuxuu muujinayaa taageeradiisa bulshada LGBT kadib toogashadii Orlando